Momba anay - Qingdao ShiningPlast Material Technology Co., Ltd.
TEKNOLOGY FAHAROA FAMPIASA BOKY CO., LTD.
Manokana manokana amin'ny fanamboarana lamba vita amin'ny PP / PE tenona ary Spunbonded PP Nonwoven lamba.
Miaraka amin'ny traikefa sy fahalalàna lehibe amin'ny indostria, dia manarona ny zavatra takinao amin'ny vahaolana tsara indrindra izahay.
Fampivoarana sy fitomboana 25 taona dia mampahafantatra anay ny vahaolana tsara kokoa ho anao.
Mitazona ny tenantsika amin'ny toerana ambony indrindra mampiavaka antsika amin'ny mediocrity.
Ny rojotra famatsiana feno sy ny teknolojia mandroso dia ahafahantsika mamokatra vokatra be dia be amin'ny fifehezana vidiny tsara.
Qingdao ShiningPlast Material Technology Co,. Ltd dia manana departemanta roa lehibe roa, ny tenona PP / PE ary ny tenona tsy mifatotra PP Spun izay niorina tamin'ny taona 1995. Miorina ao Qingdao China, tanàna tsara seranan-tsambo isika.
Mpanamboatra manentana mientana amin'ny firenena izahay, izay manamboatra ny lamba vita amin'ny lamba vita amin'ny PP / PE ary lamba vita amin'ny PP tsy voafetra. Miaraka amin'ny eritreritra "natolony" vaovao, nahazo mari-pankasitrahana izahay ary manohy hatrany ny fahazoan-dàlana amin'ny mpanjifantsika maneran-tany ary nahatratra ny fidiram-bola isan-taona izay mitentina 42 tapitrisa dolara tamin'ny taon-dasa.
What Izahay manao
ShiningPlast dia manana zavamaniry 2 izay manarona faritra manodidina ny 40000 metatra. ary ny orinasa fanamarinana nomen'ny BSCI, OEKO-TEX, ISO 14000 ary ISO 9001. Ny mpiasa 302, anisan'izany ny ekipan'ny R&D dia samy mahay ny asan'ny tsirairay avy. Manana tsipika famokarana 6 ho an'ny lamba tsy roa isika miaraka amina famoahana maherin'ny 1300 taonina isam-bolana (na kitapo 30000 isan-karazany amin'ny kitapo) ary zoro famokarana 3 ho an'ny lamba tenona PP / PE izay mahazaka manodidina ny 1000 taonina isam-bolana.
Tanjonay foana ny ho hafa sy tsy manam-paharoa. Miantehitra amin'ny fitantanan-draharaham-panjakana, teknolojia manapaka, famatsiana famatsiana feno, ihany koa ny tombony amin'ny fampifangaroana ny kofehy sy tsy mitambatra, mamokatra karazan-java-mihetsika isan-karazany izay mifanentana amin'ny fananganana fitaovana, taribola, fonosana, fambolena, mankany amin'ny tanimbary sns . miaraka amin'ny kalitao ambony indrindra.
Ao anatin'izany rehetra izany, manarona ny zavatra takinao samihafa izahay.
Nahoana ny ShiningPlast no safidinao tsara indrindra? Tsy hoe satria manana rojom-pamatsiana feno (vidiny ankapobeny) sy kalitao mahafinaritra isika, satria fantatray koa ny manome serivisy manome fahafaham-po. Ny firesahana momba ny serivisy mahafa-po, tsy ny foto-kevitra manintona fotsiny. Niresaka momba ny rafitra fitantanana nahomby tsara isika izay mahalala ny fomba handraisana haingana ny fepetra takian'ny mpanjifa sy ny tsena miaraka amin'ny saina misokatra. Miresaka momba ny ekipa varotra za-draharaha izahay izay miasa amin'ny orinasa ity mandritra ny taona maro ary mahafantatra ny teboka fanaintainanao. Miresaka momba ny rafitra famokarana efa hatramin'ny R&D izahay amin'ny famokarana famokarana be dia be, manomboka amin'ny fonosana ka hatramin'ny fandefasana, sns. Izany rehetra izany dia tokony hiara-hiasa mba hamolavola ny drafitra ara-barotra mahasoa indrindra ho anao.
HISAKA TAO TAONA 1995
TURNOVER MATY TAONA
Fantatray ny zavatra takinao ary hosaroninay izany.
ShiningPlast, tsy ny mpiara-miasa aminao ihany.